तिमीले बच्चाको अनुहार पनि देख्न पाउँदिनौ, तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनि डाक्टरले ९९ प्रतिसत आस मारेको बच्चालाई आमाले काखमा समातेर राख्न पाउँदा – NepalajaMedia
काठमाडौ । परिवारका सदस्य र डाक्टरले समेत ९९ सय प्रतिशत आस मारेको छोरालाई अहिले काखमा राख्न पाउँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका( १५ कि रेशु रावतको खुसीको सिमा छैन । उनको जिवनमा चमत्कार नै भएको छ । तर पनि अझै केही समय उनले छोराको सामान्य जिवनका लागि भने संघर्ष भने गर्नुपर्नेछ ।
उनी थाइराडको समस्यामा थिइन् । त्यसैले दोस्रो बच्चाको आमा बन्न लाग्दा नै चिकित्सकले उनलाई बच्चा अस्वास्थय हुने र आमाले नै उनको अनुहार देख्न नपाउने सम्भावना बताइदिएका थिए । उनले गर्भ ६ महिनाको हुँदा नै जन्म दिएकी थिइन् । थाइराइडको उपचारकै लागि अस्पताल गएको बेलामा गत कात्तिक १ गते उनले घोराहीस्थित गोरखा हस्पिटलमा अकस्मात बेथा लागेपछि छोरा जमाएकी थिइन् ।
शल्यकृया गरेर उनको बच्चा जन्मिएको थियो । चिकित्सकले नै आश नगरेका हुनाले उपचार सुरु गरिएन । तर बच्चाले आँखा हेरिरहेको उनका श्रीमानले देखे । आँखा हेरिरहेको देखेपछि उनलाई पनि बाँच्छ कि भन्ने आशा जाग्यो। अनि तत्कालै छोरालाई २४ किलोमिटर पश्चिम तुलसीपुरको तुलसी बाल हस्पिटलमा ल्याएर भर्ना गरे। त्यती बेला पनि उनलाई चिकित्सकले आश लाग्ने कुरा भनेनन् ।
त्यहाँ दुई महिना उपचार गराउँदा उनले भोगेका समस्या त झन सुनिनसक्नु छ । दुई महिनापछि बच्चालाई इन्फेक्सन भयो। उसको शरीरमा सेतो रगतको अभाव देखियो। त्यसका लागि उनलाई उपचारका लािग कि बाँके कि काठमाडौ लैजानुपर्ने भयो । बाँके नजिक पर्ने भएकाले उनले त्यतै लगिन् । त्यहाँ पनि उनले चिकित्सकको राम्रो कुरा सुन्न पाइनन् । ।
यो बच्चा भेन्टिलेटरबिना दुई महिनासम्म कसरी बाँच्यो भन्दै डाक्टर नै आश्चर्यमा परेको कुरा उनी अहिले पनि सम्झन्छिन् । सबैले मनोबल गिराउने कुरा मात्रै गरे। अहिले उनको छोरा ३ महिनाको भएका छन् । तर यो बिचमा उनले लाखौं रुपैया खर्च गरिन् । बाँकेवाट अहिले उनले छोरालाई फेरी दाङमै फर्काएकी छन् । तुलसीपुरमै वा दाङमै सेतो रगत चढाउने मेसिन भइदिएको भए रेशुले यतिका खर्च र झन्झट व्यहोर्नु पर्थेन।
बाँकेबाट आएपछि तुलसी हस्पिटलले केही दिन बच्चालाई राखेर उपचार गर्‍यो। अवस्था सुधार हुँदै गयो। सोमबार हस्पिटलले बच्चालाई डिस्चार्ज गरेर उनको काखमा दिएपछि उनको हर्षका आँशु खसे । अहिले पनि बच्चालाई अक्सिजन लगाउनु पर्छ। त्यसैले रेशुले छोराकै लागि भनेर तुलसीपुर बजारमै हस्पिटल नजिकै कोठा लिएर बसेकी छन्। उनी छोरा कहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ भनेर दिन गनेर बसेकी छन् ।
छोराले अक्सिजनबिना ढुक्कले सास फेर्न थालेपछि मिठाइ लगेर तुलसी अस्पतालका सबै स्टाफलाई खुवाउने रेशुले बताएकी छन । डाक्टरको मेहनत देखेर उनलाई यस्तो भावना आएको हो । सबैले आश नै छोडेको छोरालाई बचाएर दिएका डाक्टरको गुण कहिल्यै विर्सन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले भनिन् ‘ मेरो छोरा तंग्रिनासाथ मैले पनि उहाँहरूको योगदानलाई कदर गर्नेछु।’
उपचारमा संलग्न बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर खत्रीले सो बच्चालाई बचाउन आफुहरुले पुरै शक्ति प्रयोग गरेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थाका बच्चा बाँच्ने सम्भावना विदेशमा पनि निकै कम हुने उनको भनाई छ । विदेशमा पनि यस्ता बच्चाहरुको मृत्युदर ७० प्रतिशत रहेको उनको भनाई छ ।
Prev१४ लाख ऋण बोकाएर अर्कै युवति लिएर फरार, श्रीमति रुदै मिडियामा-भिडियो हेर्नुहोस
Nextयुवतीले प्रेमीसँग भन्नै नहुने ४ कुराहरु
यस्ता भए उदाहरणीय जोडी रुपा-कृष्णको छोरा, छोराको पास्नीका केही झलक हेर्नुहोस् (तस्बिर सहित)
परीक्षामा ९९.९८ प्रतिशत आएपछि पुन: परीक्षा दिँदै पल अग्रवाल
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस (25299)
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (15889)
कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] (12244)
आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो…. (10243)
यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! (8977)
अचम्मै तरिकले घट्यो सुनको मुल्य ,कति पुग्यो तोलाको ? (8731)
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (8109)
एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार (7910)
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! (7007)
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6758)
अस्पताल भर्ना भएको १० दिन पछि पूर्वराजा रानीको स्वास्थ्यबारे आयो यस्तो जानकारी